Mizara tantara momba ny fomba nahafahan’izy ireo tafavoaka velona tamin’ny fipoahan’ny volkano sy ny tsunami ny mponina ao Tonga · Global Voices teny Malagasy
Mizara tantara momba ny fomba nahafahan'izy ireo tafavoaka velona tamin'ny fipoahan'ny volkano sy ny tsunami ny mponina ao Tonga
Ity no fipoahan'ny volkano mafy indrindra teto an-tany tanatin'ny 30 taona
Voadika ny 30 Janoary 2022 5:32 GMT
Faritra iray any Tonga mampiseho ny filatsahan'ny lavenona mavesatra vokatry ny fipoahana volkano vao haingana tao amin'ny Nosy Tonga. Loharano: Wikipedia. Sary avy amin'ny NZ Defense Force, (CC BY 4.0)
Nipoaka ny volkano ambanin'ny rano Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai tamin'ny 15 Janoary no sady namoaka lavenona tany amin'ny atmosfera sy ny faritra manodidina, ary niteraka tsunami marobe izay nandrava nosy maromaro tao amin'ny firenena Pasifika Atsimon'i Tonga.
Tombanan’ny mpahay siansa fa ity fipoahana volkano ity no mahery indrindra teto an-tany tao anatin’ny 30 taona. Ny fipoahana tany Hunga ihany koa no nahitana feo mafy indrindra teto an-tany tao anatin'ny taonjato lasa. Voarakitra hatrany Japana, Etazonia ary Però ny tsunami nifandraika tamin'ny fipoahana.
Araka ny filazan'ny governemantan'i Tonga, nisy fiantraikany teo amin'ny 84 isanjaton'ny mponina ny filatsahan'ny lavenona sy ny tsunami vokatry ny fipoahan'ny volkano. Naharitra andro maromaro vao niverina ny herinaratra sy ny fifandraisana aterineto tao amin'ny nosy lehibe.
Fitantaran'ny nanatri-maso ny fipoahana
Nitatitra i Matangi Tonga Online, tranonkalam-baovao fa mbola tapaka ny zotram-pifandraisana efa ho herinandro taorian'ny fipoahana:
Fotoana mampalahelo ho an'ny rehetra eto Tonga sy ho an'ny fianakaviantsika any ampitan-dranomasina izay manahy noho ny vaovao izao. Mikorontana tsy toy ny hetsika mahazatra izahay.
Lavo niaraka tamin'ny herinjiro lehibe ato aminay ny fifandraisanay.
Nahazo mailaka marobe izahay omaly zoma 21 janoary, saingy tsy mivoaka ny valin-kafatray. Maharay hafatra an-tsoratra sms izahay saingy tsy tonga ny sms anay.
Miverina tsikelikely ny serivisy. Tsy manana aterineto feno ao amin'ny biraonay izahay. Afaka mampakatra izahay anio noho ny mpanome tolotra iray, mizara rohy amin'ny zanabolana voafetra.
Rehefa tafaverina amin'ny ampahany ny aterineto tany amin'ny faritra sasany, afaka nandefa sary misy ny voka-dratsy mandravarava nateraky ny fipoahana ireo mponina Tongana:
Sehatra tao Tongatapu… Be vovoka sy simba ary tsy maintsy atao ny fanadiovana! Saingy mangina sy marin-toerana amin`ny ankapobeny. Vonona ny ho tonga amin’izany ny olona. Isaorana Andriamanitra fa mbola mijoro izahay.
Nizara ny zavatra niainan'izy ireo nandritra ny fipoahana ihany koa ireo mpisera Facebook sasany, toa an'i Tevita Tai Fukofuka:
…Toy ny hoe nisokatra ny lanitra ary nipoaka tao anatin'ny sofiko izao tontolo izao. Nahatonga ny sofiko haneno izany, toy ny hoe ao anaty fiaramanidina midina aho ary marenina ao anatin'ny segondra vitsy. Tsy mbola nandre feo mafy be nandritra ny fiainako aho. Nihozongozona ny zava-drehetra. Ny fiara, ny trano, ny tany. Nitraka ny lanitra aho ary nahita andiana vorona am-polony mizotra amin’ny lafiny rehetra
… Nidina ny orana lavenona solifara miendrika vatokely sy lavenona ary vovoka. Renay avy eny amin’ny tafon-tranonay sy ireo trano eny amoron-dalana izany. Maizina ny lanitra, feno rahona lavenona manery ny alina ho anay.
Nampahatsiahy ny fomba nahafahan'ny fianakaviany sy ireo vahiny tafavoaka velona tamin'ny onja tsunami voalohany ny tompon'ny Tora-pasika Fialan-tsasatra Ha'atafu:
Araka ny filazan'i Moana [mpiandraikitra ny toeram-pialan-tsasatra], namely talohan'ny fipoahana lehibe ny onjan'ny tsunami voalohany. Noho izany dia tsy nanam-potoana hanaovana na inona na inona akory izy ireo raha mbola nifaoka ny onja. Raha vao tafatsoaka ireo vahiny dia tsy maintsy nianika hazo manga i Moana, Hola ary ireo ankizy mba handositra ny onja alohan'ny hidirana tanatin'ny fiaran'ny namanay ary nirohotra nankany an-tanety rehefa tonga ny fotoana.
Tsaroan'ny olona iray tafavoaka velona ny tsunami nahatratra ny haavon'ny hazom-boaniho:
“Efa mitovy ny haavon'ny hazom-boaniho ny haavon'ny ranomasina. Narianay ny zava-drehetra ary nitsambikina tao anaty fiara izahay. Rehefa nandeha fiara izahay, dia maizina ny rahona.” Ma’ata, 10 taona, avy ao amin’ny tanànan’i Kanokupolu any Tonga.
Tombanana ho olona 85.000, anisan'izany ny ankizy 36.500, no tratran'ny tsunami.
Hitan’i Hon Frederica Tuita ny lalana feno lavenona telo santimetatra. Tafasaraka tamin'ny zanany izy ary maivamaivana nahita ny fianakaviany indray:
Rehefa nandeha teny an-dalana izahay, tsy nisy fiara hafa nivezivezy, nolazaina ny rehetra mba hitady fialofana, nasaina nijanona teo izay hitan’ny polisy nandehandeha. Feno lavenona farafahakeliny 3 santimetatra ny zava-drehetra. Maizina ny lalana ary mbola tsy azo antoka tanteraka ny rivotry ny nosy. Niditra tao an-tranoko izahay ary maivana aho rehefa nahita jiro labozia namirapiratra avy tao anatiny. Rehefa niakatra aho dia niarahaba ny rahavaviko sy ny vadiny izay nitady fiarovana tao ary niditra tao an-trano tao amin'ny zanako 3 nihazakazaka nanatona ahy. Nandohalika aho ary namihina azy rehetra indray mandeha, izany no sakafo nilaiko.
Nandefa lahatsary mampiseho ny halehiben'ny filatsahan'ny lavenona tao amin'ny fiarahamoniny ihany koa izy:
Mbola manadio izahay rehetra taorian'ny fipoahan'ny volkano. Mbola tsara kokoa noho ny hafa misy vovoka ny lalana sasany. Hanomboka hiseho volana maromaro na mety ho taona maro ny fiantraikan'ny lavenona sy vovoka volkano eo amin'ny vahoakantsika
Tsaroan'i Lisala Folau ny tsy namaly ny zanany lahy raha safotry ny tsunami izy mba tsy hanarahan'ny zanany azy:
Tamin'ny 7 ora alina izany.
Nitsingevana teny an-dranomasina izahay, nifampiantsoantso fotsiny. Maizina ny andro ary tsy nifankahita izahay. Vetivety dia tsy afaka niantso ny zanako vavy intsony aho saingy reko niantso ny zanako lahy. Ny marina dia tsy misy zanaka lahy mahafoy ny rainy. Saingy ho ahy, amin'ny maha-ray ahy dia nangina aho satria raha namaly azy aho dia mety nitsambikina izy ary niezaka nanavotra ahy. Saingy azoko ny toe-javatra sarotra ary nieritreritra aho fa raha tonga ny ratsy indrindra dia (aleo) izaho ihany.
Ny eritreritro dia raha namaly azy aho dia ho avy izy ary samy hijaly izahay saingy nitsingevana fotsiny aho, voafandriky ny onja be tsy mitsahatra.
Nitsingevana tao anaty rano nandritra ny 27 ora izy vao avotra. Voaresaka tamin'ny vaovao ny tantarany:
Noderaina ho ‘Aquaman’ tena izy ny lehilahy Tongana iray 57 taona, Lisala Folau noho izy tafavoaka velona 27 ora tany an-dranomasina taorian'ny tsunami nandravarava namely ny nosy. Nilaza tamin'ny @Reuters i Folau fa nilatsaka in-tsivy izy talohan'ny nahazoany hazo ary voaaro tamin'izany
Pejy Facebook Ordinary Tongan Lives nizara sary sy tafatafa nifanaovana tamin'ireo tafavoaka velona. Nitaraina ny olona iray tafavoaka velona fa tsy afaka miverina any amin'ny nosiny intsony izy ireo:
Misy ny faniriana hiverina an-trano. Saingy vitsy dia vitsy ny trano, fiangonana ary trano fianarana mijoro eo. Lasa ny zavatra hafa rehetra. Feno atsanga navelan'ny onja ny afovoan'ny nosy. Herinandro monja no lasa saingy ho elaela vao hiala ny fahatsiarovana izany rehetra izany. Omaly hariva, niantso ahy ny zanako vavy tamin'ny 2:30 maraina nanontany ahy hoe inona no tabataba reny. Nikoropaka avy hatrany aho. Ny tabataba rehetra, na dia ny fiara mirohondrohona aza dia mety hiteraka tahotra. Izany no zava-misy tsy maintsy iainanay ankehitriny.
Mitohy ny ezaka fanampiana sy fanarenana any Tonga. Hatramin'ny faharavana, dia nikarakara hetsika fanadiovana ny mponina mba hanadio ny lalan'ny seranam-piaramanidina mba hahafahan'ny fanampiana avy any amin'ny firenena hafa hiditra.
Nofafan'ny mponina Tongana tamin'ny kifafa ny lalan'ny seranam-piaramanidina Salote Pilolevu ao Ha'apai taorian'ny fipoahan'ny #Volcano. Tsy azoko antoka hoe inona no mitranga amin'ny lavenona fa naheno dokambarotra tao amin'ny onjam-peo an-toerana aho avy amin'ny orinasa 1 eo an-toerana farafaharatsiny vonona hividy ny entana betsaka.
Nanomboka nanarina ny fiainany sy ny fiaraha-monina ny mponina Tongana, saingy maro no manahy ny amin'ny ho avy satria tandindonin-doza amin'ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro koa ny firenena nosy.